ကလေးပေါင်းရာနဲ့ချီပြီး ယဇ်နတ်ပူဇော်ထားတဲ့နေရာတစ်ခု တွေ့ရှိ – စှယျစုံသုတ
ကလေးတွေ၊ မိန်းမတွေနဲ့၊ စစ်သားပေါင်းရာနဲ့ချီကို ယဇ်နတ်အဖြစ် ပူဇော်ထားတဲ့နေရာတစ်ခု မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ မက္ကဆီကိုမြို့တော်ရဲ့ အောက်ခြေနေရာတစ်ခုမှာ တွေ့ခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါနေရာမှာ ယဇ်ပူဇော်ထားတဲ့ အလောင်းပေါင်း (၁၁၉)ခုအထိ ရှိနေပြီး၊ ဆက်တူးရင် ဆက်တွေ့ဖို့ရှိနေပါတယ်။
တွေ့ရှိတဲ့နေရာဟာ အက်ဇတက်လူမျိုးတွေ ယခင်က ကြီးစိုးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ခေတ်က တစ်ခုခု အကြောင်းပေါ်တိုင်း နတ်ဘုရားတွေ စိတ်မဆိုးအောင်ဟုဆိုကာ ကလေးတွေ၊ မိန်းမတွေ၊ စစ်သားတွေကို ယဇ်ပူဇော်ပြီး နတ်ဘုရားတွေကို ပသလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ တစ်ကြိမ်တည်းမှာကို လူပေါင်းရာနဲ့ချီ စတေးပြီး ပူဇော်တာမျိုးရှိပါတယ်။
Handout photo taken on September 22, 2020 and released on December 11, 2020 by the Mexican National Institute of Anthropology and History (INAH) showing Mexican anthropologist Lorena Velazquez Vallin cleaningarecent discovery of the eastern end and the external facade of the Huei Tzompantli (“wall of skulls”) dating back to, at least, between 1486 and 1502, in Mexico City. – The Huei Tzompantli isatower or circular wall of human skulls of 4.7 meters of diameter, which northeastern end had been discovered in 2015. 119 skulls have been counted so far in the eastern side, adding up to the 484 previously identified. (Photo by – / INAH / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / INAH – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
အများအားဖြင့်တော့ နေနတ်ဘုရားကို ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပြီး၊ အခု ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုက Huei Tzompantli နယ်မြေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဘူမိဗေဒပညာရှင် Barrera Rodriguez က ပြောပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဘယ်သူက စစ်သား၊ ဘယ်သူက မိန်းမဆိုတာ ခွဲခြားရခက်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကလေးအရိုးတွေကတော့ မှန်းဆကြည့်ရတာ လွယ်ကူတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
Handout photo taken on September 22, 2020 and released on December 11, 2020 by the Mexican National Institute of Anthropology and History (INAH) showing the recent discovery by Mexican archaeologists of the eastern end and the external facade of the Huei Tzompantli (“wall of skulls”) dating back to, at least, between 1486 and 1502, in Mexico City. – The Huei Tzompantli isatower or circular wall of human skulls of 4.7 meters of diameter, which northeastern end had been discovered in 2015. 119 skulls have been counted so far in the eastern side, adding up to the 484 previously identified. (Photo by – / INAH / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / INAH – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
အခုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကို National Institute of Anthropology and History (INAH) က စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ (၁၅)ရာစုခေတ်က အက်ဇတက်တွေ ခေတ်ကောင်းခဲ့ပြီး၊ နယ်မြေတစ်ခုချင်းစီမှာ အုပ်ချုပ်သူတွေ၊ ပြည်သူတွေနဲ့ သူတစ်လူငါတစ်မင်း အချင်းချင်း ဗိုလ်ကျခဲ့ကြပါတယ်။ အကြောက်တရား ကြီးစိုးတဲ့ခေတ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ စွဲမိစွဲရာ ကိုးကွယ်ရင်း ပြည်သူတွေမှာ ငထွားခါးနာ ဖြစ်ကြရပါတယ်။
အခုတွေ့ရှိမှုဟာ ယခင်က မျှော်စင်ပုံစံမျိုးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ယဇ်နတ်ပူဇော်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နံရံတွေကိုတော့ ယဇ်ပူဇော်ခံရသူတွေရဲ့ အရိုးတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်ခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။ အမြင့်အားဖြင့် (၁၆)ပေဝန်းကျင်ခန့် ရှိပါတယ်။ အဆိုပါနေရာကို တွေ့ရှိပုံကလည်း အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုကို ပြန်လည်မွမ်းမံစဉ်၊ မြေတူးရာကနေ တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။
Ref ; DalyMail
ကလေးပေါငျးရာနဲ့ခြီပွီး ယဇျနတျပူဇျောထားတဲ့နရောတဈခု မက်ကဆီကိုမွို့တျောမှာတှရှေိ့